Puntland oo ka digtay in la soo celiyo hawadda Soomaaliya iyo khuburo ka hadashay (Dhegayso) – Radio Daljir
Oktoobar 17, 2013 4:14 b 0
Boosaso, October 17, 2013 – Dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa dadaal dheer ugu jirta in ay la soo wareegto maamulka hawadda Soomaaliya iyo dhaqaalihii hay?ada caalamiga ah ee duulimaadyada iyo saadaha hawadda ee ICAO ay aruurisay 22 sano ee bur burka.
Heshiis ay dhowaan kala saxiixdeen maamulka ugu sareeya shirkada ICAO iyo wasiirka warfaafinta, boostada, Isgaarsiinta iyo gaadiidka Soomaaliya Cabdulaahi Ciil-mooge Xirsi, ayaa lagu sheegay in dowladdu la wareegayso dhaqaalihii shirkadu ka qaaday gaadiidka isticmaala hawadda dalka.
?Heshiiskan waxaa uu xaqiijinayaa in aan la wareegayno hawadda Soomaaliya bilowga 2014-ka sidoo kale waxaan la wareegaynaa canshuurta hawadda dalka.? Ayuu yiri wasiir Ciil-mooge oo ka hadlay arrimaha hawadda dalka, balse Puntland iyo Soomaaliland ayaa arintaas ka soo horjeestay.
Madaxweynaha Puntland Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Faroole oo shalay shir jaraa?id ku qabtay Garoowe mar uu ka soo noqday safar dibeda ah ayaa waxaa uu kaga hadlay arrimo ay ku jirto hawadda dalka, isagoo beesha caalamka ka dalbaday in aan hawadda xiligan la soo wareejin.
?Suurtagal maaha in hay?adaha caalamiga ah ay xiligan ku wareejiyaan dowladda dhexe maamulka hawadda Soomaaliya, ilaa la helo dib-u-heshiis dhamaytirsan, oo dowladdu si buuxda u qaadato dastuurka dalka u yaala.? Ayuu yiri Dr. Faroole
Wasaarada duulista hawadda ee Soomaaliland ayaa iyana horay u sheegtay in ay Soomaaliland marnaba ogolaan doonin in hawadeeda laga maamulo Muqdisho, waxaa uu sheegay maamulku in ay beesha caalamka kala hadlayaan arimahaas.
La wareegista hawadda Soomaaliya ayaa haatan muran badan ka taagan yahay waxaana inta badan muuqda dal-daloolo muran badan ka dhex dhaliyey dowladda dhexe iyo maamulada dalka, duuliye sare Faarax Axmed Maxamed ayaa idaacada daljir wax ka weydiisay bal halka ay ku dambayn karto marxalada taagan ee khusaysa hawadda dalka.
Dhegeyso: Maxamuud Cabdi Ibraahim oo daljir ka tirsan ayaa waraystay duuliye Faarax Axmed?